Nosakanan’i Rosia Ny Lahatsarin’ny Euronews Iray Noho ny Fanehoan-kevitry Ny Mpiserasera “Extremista” Iray · Global Voices teny Malagasy
Nosakanan'i Rosia Ny Lahatsarin'ny Euronews Iray Noho ny Fanehoan-kevitry Ny Mpiserasera “Extremista” Iray
Voadika ny 20 Aogositra 2015 18:28 GMT
Vakio amin'ny teny English, 한국어, বাংলা, Español, English
Manakana ireo lahatsary YouTube ny Rosiana mpiandraikitra ny sivana ankehitriny noho ireo fanehoan-kevitra manohintohina avy amin'ny mpiserasera. Sary namboarin'i Tetyana Lokot.
Efa nanakatona ireo lahatsary Youtube taloha ny Roscomnadzor, sampandraharaha mpanaramaso ny aterineto ao Rosia, mandrahona [hanakatona] ny fidirana amin'ny tolotra iray manontolo amin'ireo orinasa mpanao raharahan'aterineto tsy afaka manakana ny zotra HTTPS . Ity tranga farany ity kosa, na izany aza, dia mametraka modely vaovao ho an'ny RuNet, satria tsy mandika ny lalàna Rosiana ny lahatsary voalaza ao amin'ny pejy izay nosakanan”ireo mpanivana. Nefa dia fanehoan-kevitry ny iray amin'ireo mpiserasera tao amin'ny lahatsary no nampidi-kizo azy.
Mifandraika amin'ny lahatsarim-baovao amin'ny teny Rosiana navoakan'ny Euronews ilay fanakanana. Efa nivoaka tao amin'ny fantsona YouTuben'izy ireo, herintaona lasa izay, tamin'ny 20 Jona 2014, ary manana ny lohateny hoe «Боевики ИГИЛ призывают к джихаду мусульман из западных стран» (Miantso ny Silamo Avy Ao Amin'ny Firenena Tandrefana Hanao ny Jihad Ireo Mpiadin'ny ISIS”) ny vaovao. Noraisin'ny Roscomnadzor ny raharaha momba ilay pejy taorian'ny didim-pitsarana, izay mahavariana, fa tsy nanome baiko hanakatona ny tranonkala, ny lahatsary na ny adiresy IP-n'ny YouTube.
Nanapa-kevitra ny fitsarana monisipaly Tatarstan tamin'ny volana Jiona fa fanehoan-kevitra tokana tamin'ny lahatsarin'ny Euronews no nosokajiany ho “fitaovana extremista” taorian'ny fitoriana napetraky ny mpampanoa lalànan'ny tanàna. Ny fanehoan-kevitra, nalefan'ilay mpiserasera antsoina hoe “dihim-panaitaram-pilàna” 10 volana mahery izay, tamin'ny Oktobra 2014 dia milaza ny fankahalany ny fivavahana silamo ary ahitana antso hanao herisetra amin'ny Silamo.
Milaza mazava ny didim-pitsarana fa ny lahatsoratra amin'ilay fanehoan-kevitra dia ahitana “famantarana ireo fitaovana extremista” ary tokony heverina ho “vaovao voaràra ao amin'ny faritanin'i Federasiona Rosiana.” Na izany aza, tsy ahitana antso hametra ny fidirana amin'ny lahatsarin'ny Euronews na habaka Youtube iray manontolo ny didim-pitsarana.
Toa nadikan'ny Roscomnadzor amin'ny fomba fijeriny ny didim-pitsarana, satria nampidiriny tao amin'ny lisitr'ireo habaka voaràra ny pejy misy ny lahatsarin'ny Euronews, na dia eo aza ny zava-misy fa tsy hita mandika lalàna ny lahatsary voalaza. Midika ihany koa izany, satria mifandraika amin'ny adiresy IP-n'ny tranonkala ny fanakanana, ary satria mampiasa ny arofenitra fanafenan-tsoratra HTTPS ny youtube, dia tsy maintsy hanakana ny youtube iray manontolo ireo orinasa mpamatsy tolotra aterineto sasany ao Rosia ho fanajana ny fandraràna ny pejy.
Manatevin-daharana ny isan'ireo pejy Youtube hafa mbola ao anatin'ny lisitry ny habaka voaràra ity lahatsarim-baovao nosakanana ity, saingy mametraka modely tokana fa ireo tompon'ny lahatsary sy ny sehatra nampiantrano azy dia tompon'andraikitra amin'ny fanehoan-kevitry ny mpiserasera apetraky ny olona ao amin'ny pejy. Mety hanokatra ny famerana ny fahalalaham-pitenenana ao amin'ny RuNet izany, ary ahafahan'ireo olona ratsy saina hikirakira votoaty ao amin'ny sehatra aterineto hamely ny habatranokala na olona mamoaka votoaty ‘tsy tiana tsy nirina’ ho lasibatr'ireo mpanao sivana faingampaingan-tanana ao amin'ny firenena .